यसकारण अष्ट्रेलिया तपाईका लागि होइन,तपाईं आउँदै नआउँनुहोस् ! – NepalNote
यसकारण अष्ट्रेलिया तपाईका लागि होइन,तपाईं आउँदै नआउँनुहोस् !
Nov 27, 2018 by nepalnote123	in देश
एसएलसी सकाएर प्लस २ पढ्ने अनि अष्ट्रेलिया या जापान जाने । अहिले अधिकांश नेपाली विद्यार्थीहरुको एइम अर्थात लक्ष्य नै यही बनेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको तथ्यांक अनुसार यही दुई मुलुकमा सबैभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी गएका छन् । गत वर्षको ११ महिनामा झण्डै ३२ हजार जना नेपाली विद्यार्थीले विदेशमा अध्ययन गर्न जान नो अब्जेक्सन लेटर लिएका थिए । यसरी जापान र अष्ट्रेलिया आउँन चाहने नेपाली विद्यार्थीहरुको उदेश्य भने फरक फरक हुने गरेका छन् । कोही देखासिकीका कारण,कोही पैसा कमाउँने सपना बोकेर त कोही यी देशहरुको जीवनशैलीबाट लोभिएर आउँने गरेका छन् । साँच्चिकै पढ्नकै लागि आउँन चाहने विद्यार्थीहरु त अत्यन्त न्यून मात्र भेटिन्छ । धेरै नेपाली विद्यार्थी र तिनका अभिभावकहरु नेपालमा बसेर जापान अष्ट्रेलियाका बारेमा अनेक सपना देख्छन् । तर यथार्थ त्यस्तो छैन । सपना र यथार्थसँग मेल नखाँदा धेरै विद्यार्थीहरु डिप्रेसनको शिकार बन्ने गरेका छन् । त्यसैले विद्यार्थीहरुकै अनुभवमा जापान या अष्ट्रेलिया किन जाने र नजाने भन्नेबारेमा बूँदागत रुपमा चर्चा गर्न चाहन्छु ।
अष्ट्रेलिया आउँदै नआउँनुस् :
१ यदि तपाई चर्को ब्याजमा ऋण लिएर आउँने योजनामा हुनुहुन्छ भने मेरो सुझाव मान्नुहोस्–आउँदै नआउँनुहोस् । किनभने यहाँ आएर तपाईले ब्याज त जसोतसो तिर्नुहोला तर सावाँ तिर्न ढुङ्गै चपाउँनुपर्नेछ ।
२ यदि तपाईको प्राथमिकता काम हो वा पैसा कमाउँनु मात्र हो भने पनि तपाई नआउँदै उत्तम हुन्छ । किनभने विद्यार्थीले पूर्णकालीक कामदार भएर काम गर्नै पाउँदैन । स्कूल,कलेजको कक्षाका कारण भ्याउँने स्थिति पनि हुँदैन । कक्षामा महिनाको हाजिरी नपुगे तपाईको भिसा नै संकटमा पर्न सक्छ ।
३ यदि तपाई एक्लै संघर्ष गर्न वा रमाउँन सक्नुहुन्न भने कृपया विचार गर्नुहोला । किनभने जापान अष्ट्रेलियाको जीवनशैली तपाईले विल्कुल फरक पाउँनुहुनेछ । यहाँको व्यस्त र प्रतिस्पर्धी जीवनशैलीले मेशिनको जस्तो तालिकावद्द जीवन बाँच्नुपर्छ यहाँ । त्यसैले कतिपय अवस्थामा एउटै कोठामा बस्ने साथीहरुसँग भेट्न पनि विकेण्ड नै आउँनुपर्ने हुन्छ ।
४ यदि तपाई धेरै आराम चाहने वा कम दुख गर्ने खालको हुनुहुन्छ भने तपाईलाई गाह्रो हुनसक्छ । किनभने यहाँ सबैले आफ्ना लागि सबथोक आफैं गर्नुपर्छ । जस्तो खाना पकाउँने,लुगा धुने,बजार जाने,औषधी किनेर ल्याउँनेसम्मका काम आफैं गर्नुपर्छ । साथीभाइ त हुन्छन् तर कहिले काहीं रमाइलोमा भेटिने वा साथ दिने मात्र ।
५.यदि तपाई सेड्युलमा चल्नसक्नुहुन्न भने पनि जापान अष्ट्रेलिया तपाईलाई काम छैन । किनभने यहाँ सुत्ने,उठ्ने,काममा जाने र आराम गर्नेसम्मको निश्चित टाइम सेड्युल हुन्छ । एक मिनेटको गडबढीले पनि दुख पाउँन सक्नुहुन्छ । जस्तो बस स्टपबाट बस विहानको ७ः३० मा हिड्ने सेड्युल छ भने तपाईको लागि भनेर ७ः३१ सम्म कुरेर बस्दैन । त्यो एक मिनेटले तपाईको सबै दैनिकी र काम विग्रन सक्छ ।
६.यदि तपाई हरेक कुरा पैसामा तौलनुहुन्छ भने तपाईलाई यहाँ बाँच्न गाह्रो हुन्छ । जस्तो एक कप कफीका लागि ५०० रुपैयाँ,एक मुठा सागका लागि ४ सय रुपैयाँ वा मोबाइलको मासिक विल ६ हजार रुपैया पर्ने कुरालाई इश्यू बनाउँनुहुन्छ भने गाह्रो पर्न सक्छ । किनभने तपाईको आम्दानी डलर वा येनमा हुन्छ भने खर्च पनि त्यसैमा हुन्छ भन्ने सोच्न आवश्यक छ ।
७. विद्यार्थी भिसामा आए पनि तपाईको अन्तिम लक्ष्य भनेको पीआर पाउँनु हो भने मानसिक रुपमा तयार रहनुहोस्– सबै सोचेको पूरा नहुन सक्छ । किनभने सबै विद्यार्थीहरुले अध्ययन सकिसकेपछि सहजै पीआर भीसा पाएका छैनन् र पाउँदैनन् पनि । माथि उल्लेखित कुराहरु त केही उदाहरण मात्र हुन् । यदि यस्ता कुराहरुभन्दा तपाई माथि हुनुहुन्छ भने आउँनुहोस् जापान र अष्ट्रेलियामा तपाईलाई स्वागत छ । यहाँको जीवनशैली,समृद्धि,अवसर,समान्ता,सुरक्षा,विकास र प्रविधिले तपाईलाई अवश्य पनि लोभ्याउँनेछ । आफैंले कर्म गरेर,परिश्रम गरेर बाँच्न यही मुलुकले सिकाउँनेछ । अनि बल्ल आफ्नै खुट्टामा उभिएर दुनियाँ हेर्नुको मज्जा चाख्न पाउँनुहुनेछ ।